गोंगबु घटना प्रकरण : कल्पनाले खेल्ने सिरियलको केहि अंश यस्तो छ, अभिनय पनि निकै राम्रो रहेछ (भिडियो) « गोर्खाली खबर डटकम
उच्च कोलेस्ट्रोलका कारण हुन्छ हृदयघात, यस्ता पूर्व संकेतबारे बेलैमा रहनुहोस् सावधान
गोंगबु घटना प्रकरण : कल्पनाले खेल्ने सिरियलको केहि अंश यस्तो छ, अभिनय पनि निकै राम्रो रहेछ (भिडियो)
काठमाण्डौ – कुनै बेला कलाकारको रुपमा आफुलाई स्थापित बनाउ संघर्ष गरेकी कल्पना मुडभरी (पौडेल) को नाम अ’पराधको दुनियामा जोडिएको छ । उनी एक कलाकार थिइन् । उनले सरी ल र हर्के हवल्दार टेलिफिल्ममा भूमिका निभाएकी थिइन् । तर उनले आफनो जिवनमा गरेको अ’पराध भने कुनै फिल्मको भन्दा कम छैन । सबैको मन मुटु कपाउने खालको छ । काठमाडौको गोंगबुमा ६ दिन अघि भएको घटनामा कल्पना पौडेलको हात भएको प्रहरी अनुसन्धानवाट देखिएपछि अहिले उनी हिरासतमा छन् । उनले रोल्पाका कृष्णबहादुर वोहराको वि’भत्स तरिकाले ज्या’न लिइन् । उनी मात्र यो घटनामा सामेल भइनन् जिवनलाई राम्रोसंग बुझ्नै नपाएका आफन नाबालक छोराछोरी पनि सामेल गराइन् ।
उनी एक कलाकार पनि थिइन् भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि अहिले उनले अभिनय गरेका टेलिसिरियलका बारेमा खोजि हुन थालेको छ । त्यती ठूलो घटना गराउन सक्ने कल्पना कस्ति छन् भन्ने कौतुहलता सबैमा छ । त्यसैले उनले अभिनय गरेका टेलिसिरियलका भिडियो खोजि हुन थालेको छ । पहिला त्यती नचलेका उनका कार्यक्रमका भिडियो यो घटना पछि चल्न थालेका छन् । मानिसहरुले ति सिरिययल खोजी गर्न थालेपछि भिडियोको भिजिटर पनि बढेका छन् ।
चितवनकी कल्पना मुडभरी विवाहित हुन् । तर श्रीमानसंग सम्बन्ध विग्रिएका कारण उनी छोराछोरी सहित काठमाडौमा बस्दै आएकी थिइन् । दुई विवाह गरेका कृष्णबहादुर पनि दुवै श्रीमतीसंग सम्बन्ध विग्रिएका कारण एक्लै थिए । उनी ८ महिना देखि गोंगबुकै एक होटलमा बस्दै आएका थिए । फेसवुकवाट चार वर्ष अघि चिनजान भएको उनीहरुको सम्बन्ध प्रेममा परिणत भयो । तर दुई जनाबीच फेरी समझदारी हुन छोडेपछि घटनाले यति ठूलो रुप लिएको हो । प्रहरीले अहिले सो घटनाका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
घण्टै पिच्छे बिरामी म र्दै छन झन्डा हल्लाएर मात्र हुन्छ मन्त्री ज्यु-(हेर्नुहोस रबिको यो प्रश्न भिडीयो सहित)
घर बाहिर मास्क नलगाइकन लखर-लखर हिँड्नेलाई मुर्गा बन्ने देखी यस्तो सजाय ! (भिडियो)
mगर्भवती नर्स जसले आफ्नो नजन्मिएको बच्चासँगै साढे तीन वर्षका बच्चा र श्रीमानलाई छोडेर सदाको लागि यो संसार छाडिन्, अन्तिम अवस्थामा रुदै रेकर्ड गराएको भिडियो भाइरल जसले सबैलाई रुवायो ! (भिडियो)